Waa Kuwan LABADA Xiddig Ee Laf-Dhabarta U Ah Real Madrid Ee Seegaya Final-ka Spanish Super Cup - Laacib
HomeWararka CiyaarahaWaa Kuwan LABADA Xiddig Ee Laf-Dhabarta U Ah Real Madrid Ee Seegaya Final-ka Spanish Super Cup
Waa Kuwan LABADA Xiddig Ee Laf-Dhabarta U Ah Real Madrid Ee Seegaya Final-ka Spanish Super Cup
Kooxda Real Madrid ayaa helaysa warar aan u fiicnayn kahor kulanka Final-ka Spanish Super Cup ee ay habeen dambe dalka Saudi Arabia kula ciyaarayso dhigeeda Athletic Bilbao.
Labada xiddig ee ay Los Blancos warka aan u wacnayn ka heleen ayaa ah labada difaac ee asaasiga u ah ee Dani Carvajal iyo David Alaba. Alaba ayaa isagu kulankii afar dhammaadka ee Clasico ku seegay sababta dhaawac muruqa ah.
Sida lagu sheegay warbixin ka timid wargeyska MARCA, 29 sano jirkaas ayay haatan ku dhawaad hubaal tahay inuu seegayo ciyaarta Final-ka waxaana lagu wadaa inuu u duulo dalka Spain halkaas oo uu soo kabashadiisa kaga shaqayn doono.
Alaba ayaan wax tababar ah samayn tan iyo markii uu dhaawacu ku gaadhay tababarkii koowaad ee Los Blancos ku sameeyeen magaalada Riyadh, sidoo kale waxa uu shaki ku jiraa haddii uu soo gaadhi karo kulanka Elche ee Usbuucan dhexdiisa.
Dhinaciisa Dani Carvajal ayaa isaga laga helay sadhada Korona Fayras oo la hubaa inuu maqnaan doono halka Jesus Vallejo uu ku dhibtoonayo inuu taam ka noqdo jug gaadhay.
Lucas Vazquez ayaa la filayaa inuu booska daafaca midig ka bedelo Carvajal halka Nacho Fernandez iyo Eder Militao ay sii wadi doonaan inay lamaane ku noqdaan doorka daafaca dhexe.